Wenger: ‘Sida Xayawaanka Ayuu Garsooruhu Noola Dhaqmay’
HomeWararka MaantaWenger: ‘Sida Xayawaanka Ayuu Garsooruhu Noola Dhaqmay’
Tababaraha Arsenal ayaa cabasho ka muujiyey go’aamo dhexdhexaadnimada ka baxsanaa oo uu garsoorihii hayey ciyaartii guul-darradu ka soo gaadhay ee Manchester City ka gaadhay khaladaad lagula kacay.
Goolka koowaad ee Manchester City oo uu dhaliyey Leroy Sane ayaa markii dib loo daawaday waxa caddaatay in uu ahaa Offside caddaan ah, laakiin garsooraha ayaa ku adkaystay inuu gool yahay.
Goolka labaad ee ay dhalisay Manchester City oo Raheem Sterling shabaqa ku ruxay, waxa offide caddaan ah ku jiray David Silva oo waliba tiigsaday kubadda uu soo laagay Raheem, laakiin garsooraha ayaa taasna ka dhigay gool.
Haddaba, Wenger ayaa ku tilmaamay garsooraha inuu ula dhaqmay sidii xayawaan lagu xayo meel lagu daawado, waxaanu yidhi: “Way adag tahay in la aqbalo ciyaar sidan oo kale ah. Laakiin si fiican ayaa loo garanayaa in garsooruhu uu noo ilaaliyey sidii xayawaano lagu hayo beer (zoo), markaa waa inaanu u hoggaansano go’aamadiisa.” Sidaas ayuu yidhi Arsene Wenger.
Gunners ayaa ciyaarta bilowgeediiba hoggaanka qabatay markii uu gool u dhaliyey Theo Walcott oo kubbad ka helay Sanchez, laakiin City oo awooddeedu sarraysay ayaa kala-daadisay kubbaddii quruxda badnayd ee Arsenal, ulana ciyaartay sidii koox yar oo heerka labaad ah.
Wenger oo sii faahfaahinaya sida uu uga biyo diiday go’aanka garsooraha waxa uu yidhi: “Waxaan doonayey in ciyaartoyga la ilaaliyo, waxaan rabay inay bed-qabaan, laakiin xattaa haddii ay samayn lahaayeen go’aamo sax ah, way wanaagsanaan lahayd.”
Wenger waxa uu ku adkaystay in labada gool ee Man City ay Offside ahaayeen, waxaanu yidhi: “Waan fahmi akraa, City wax aka muuqatay farxad, way fiican tahay, laakiin goolasheedu offside ayey ahaayeen.”
Roma Oo Fiorentina Kala Baxday Hogaaminta Seria A
Tottenham vs West Brom 1-1 – Highlights & Goals – 25 November 2017
Middlesbrough vs Sunderland 2-0 All Goals & Highlights – #FACUP